श्रीमान श्रीमतीको माया यस्तो पो हुनुपर्छ ! श्रीमानको कमाएको घर खर्च श्रीमतीको आम्दनीलाई बचत ! – हिमाल न्युज
श्रीमान श्रीमतीको माया यस्तो पो हुनुपर्छ ! श्रीमानको कमाएको घर खर्च श्रीमतीको आम्दनीलाई बचत !
प्रत्येक दिन बिहान ४ बजे घडीको ‘टिरिङ–टिरिङ’ आवाजले गंगालाई निद्राबाट ब्यूँझाउँछ। उनी हतारहतार उठ्छिन्, र नानीबाबुहरुलाई खाजा तयार गर्नतिर लाग्छिन्। ७ बजेभित्र बिहानको खाना तयार गरिसक्नुपर्छ उनले। सारा घरधन्दा बिहान ७ बज्न नपाउँदै सकेर उनी गाडीको चाबी लिएर बाहिर निस्कन्छिन्। अघिल्लो दिन बेलुकै तयार पारेर राखेका खुद्रा सामान बिक्रीका लागि गाडी लिएर कुश्माबजार निस्केकी उनी ९ बजे स्थानीय व्यापार सकेर घर फर्किन्छिन् र आफ्ना नानीबाबुहरुलाई खाना खुवाएर विद्यालय पठाउन भ्याउँछिन्।
गाँउपालिका अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार चौधरी यसरी बने गाँउलेहरूको...
डलरको लोभमा दलालहरुले धर्म निरपेक्ष बनाए, माला जप्ने...
जुमडाँडाका ४ दृश्यः कसको मन रुँदैन ? वृद्ध...
कथाः सपनाको उडान भर्ने विमान !
यी हुन काठमाडौमा ट्याक्सी चलाउने एकल महिला! कमाएको...
चेतना अभावकै कारण समाजमा लैङ्गिक हिंसा : मन्त्री...
नेपाललाई बाहिरी हस्तक्षेपबाट बचाउन प्रधानमन्त्री ओलीले खुट्टा कमाउनु...